သင်၏ Android ကို Sense7နှင့် HTC အက်ပ်များအားလုံးဖြင့် HTC အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ Androidsis
အောက်ပါ post ၌သင်တို့ကိုငါပြသသောဗီဒီယိုအားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည် သင်၏ Android ကို HTC အဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း, HTC Sense7နှင့်မူလ HTC အက်ပ်များအားလုံးတပ်ဆင်ပါကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော HTC ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော Feeds Reader ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် application များအပါအ ၀ င် BlinkFeed သင့်ရဲ့လူမှုရေးကွန်ယက်များအပြင်ဂီတအပလီကေးရှင်းများ၊ ပြခန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားနာရီနာရီဝစ်ဂျက်၊ HTC မေးလ်၊ နာရီ၊ ပြက္ခဒိန်၊ ဖိုင်စူးစမ်းသူ၊ တကယ့် pass ဖြစ်သည့် HTC ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသို့မဟုတ် HTC ကီးဘုတ်သို့မဟုတ်ရောင်စုံ HTC ရာသီဥတုလျှောက်လွှာပင်။
သင်၏ Android ကို HTC တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးအရာများမှာ၎င်းဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော Recovery မရှိဘဲနှင့်၎င်းကို Root အသုံးပြုသူများမဖြစ်စေရပါ။ ဒါကြောင့်အခုသင်သိပြီ၊ အကယ်လို့သင်ဟာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံစုံနိုင်ငံစုံ HTC ရဲ့ဆိပ်ကမ်းများ၏သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ကိုနှိပ်ပါ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ပါ။ ၎င်းကိုရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သော apk များ၏တိုက်ရိုက် download ကိုရယူရန်။
1 သင်၏ Android ကို HTC အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ HTC Sense နှင့်ဇာတိ HTC အက်ပ်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းခြင်း
2 HTC Sense7နှင့် HTC အက်ပ်အားလုံး၏ဓာတ်ပုံပြခန်း
သင်၏ Android ကို HTC အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ HTC Sense နှင့်ဇာတိ HTC အက်ပ်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းခြင်း
ဤအရာကိုရရှိရန်လိုအပ်သည့် apk ဖိုင်များအားလုံးကိုမစတင်မီပင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာမှာမနည်းသေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ချိန်ညှိချက်များနှင့်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လုံခွုံရေး, ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့် option ကို enable မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ သို့မဟုတ်မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ။
ဤအရာပြီးဆုံးပါကကျွန်ုပ်တို့ရရှိရန်လိုအပ်သော apk အားလုံးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတပ်ဆင်နိုင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Sense 7၊ Blinkfeed နှင့်ဇာတိ HTC အက်ပ်များအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကို HTC တစ်ခုလုံးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ၎င်း၏ဂီတအက်ပလီကေးရှင်း၊ ပြခန်းနှင့်ကင်မရာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းများကများသောအားဖြင့်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော Desktop Widgets များအပါအ ၀ င်ကြီးမားသောငွေကြေးပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည့် HTC ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (APK APPLICICICAME NAME ပေါ်တွင် APK ကိုနှိပ်ပါ။ )
အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သော Blinkfeed ဖြင့် HTC Sense7Launcher။ မြင့်မားသော resolution ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ သို့မဟုတ်ပုံမှန်ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
web browser ကို
ဖိုင် Explorer ကို.
HTC တေးဂီတ y HTC တေးဂီတဝစ်ဂျက်
HTC Wheatherclock ဝစ်ဂျက်
ဒီအပြင်ကျနော်တို့ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်များကို Blinkfeed မှတဆင့်စည်းညှိပါအောက်ပါ plugins များကိုလည်း apk format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူရပါလိမ့်မည်။
Google က Plus အား.
ဤအရာအားလုံးအပြင်သင်သတိထားမိခဲ့သည့်အတိုင်း၊ HTC ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းကဤတွင်မထည့်ပါ XDA developer များကပြင်ဆင် pack ကိုဒါကြောင့်ဘဝကိုရှာခဲ့ရတယ်၊ ပိုက်ကွန်ပေါ်မှာဒီဗားရှင်းကိုငါရှာခဲ့တယ် apk format ဖြင့် htc ကင်မရာငါ၏အ Android အတွက်perfectlyုံအလုပ်လုပ်သော။
HTC Sense7နှင့် HTC အက်ပ်အားလုံး၏ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android application များ » HTC Sense7နှင့်ဇာတိ HTC အက်ပ်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ Android ကို HTC တစ်ခုအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း
ငါကင်မရာ၏ apk ကို install ချင်သောအခါ, ငါ့ကိုအမှားတစ်ခုက "ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအမှား, အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်" ကပြောပါတယ်နှင့်အကျိုးဆက်ငါ apk install လုပ်လို့မရပါဘူးကပြောပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ???
၎င်းသည် Android5နှင့်အထက်အတွက်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တွင် HTC M8 ရှိပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ဤအလှူငွေကိုနှစ်သက်သည်။ ယခုတွင် Moto Maxx ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်အမှန်တရားသည်အလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပြီးဤ Apk ၏ HTC သည်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကောင်းများကိုပေးခဲ့သည်။ ငါ့ကိုငါအရင် HTC အကြောင်းကောင်းကောင်းမှတ်မိစေခဲ့တဲ့ဒီအလုပ်အားလုံးအတွက် Francisco Ruiz ကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဖုန်းတွေပြောင်းလိုက်တဲ့အခါတူညီတဲ့အသွင်အပြင်ကိုပေးဖို့ Apps ကိုကျွန်တော်သိမ်းလိုက်ပါမယ်။
Angel Alberto အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုသင်ကူညီနိုင်မလားမသိပါ။ ကင်မရာ၏ apk ကိုလည်းကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသော်လည်း၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ap အခြား apk များကကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ကင်မရာအတွက်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုသင်ကူညီနိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
Bluboo Edge တွင်သင့်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြည့်ရန်အာရုံခံကိရိယာလည်းရှိသည်
WhatsApp တွင်နောက်ခံရှိအသံမှတ်စုများကိုအဆင့် ၂ ဆင့်စစ်ဆေးပြီးပြန်ဖွင့်ထားသည်